के साच्चिकै बोक्सीले रगत चुस्छ त ? यी ८ कारणले बताउँछ वास्तविकता – ramechhapkhabar.com
के साच्चिकै बोक्सीले रगत चुस्छ त ? यी ८ कारणले बताउँछ वास्तविकता
कहिलेकाहिँ विहान उठ्दा तपाईंको शरीरमा निलो दाग–धब्बा देखिन्छ ? यस्तो दाग दुख्छ पनि ?
यदि तपाईंको शरीरमा पनि निलो दाग र धब्बा देखिन्छ भने सावधान भइहाल्नुहोस् । किनकि शरीरमा आउने कुनै पनि परिवर्तनले तपाईंको नराम्रो स्वास्थ्य अवस्थालाई संकेत गरिरहेको हुन्छ ।
नेपाली समाजमा एउटा अन्धविश्वास पनि छ, शरीरमा निलो दाग देखियो भने बोक्सीले चुसेको भन्ने गरिन्छ । खासगरेर महिलाको खुट्टा र पाखुरामा यस्तो दाग देखियो भने बोक्सीले चुसेको भन्ने गरिन्छ । तर, यसमा कुनै सत्यता हुँदैन ।